အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: သကြားထက် ချိုသောအရာ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, February 20, 2010 Saturday, February 20, 2010 Labels: ဘာသာပြန် ခံစားမှု ၀တ္ထုများ
18 Responses to “သကြားထက် ချိုသောအရာ”
ဘာသာပြန်တတ်ချင်လိုက်တာ အရမ်းကို အားကျပါတယ်
ပီတိ ဆိုတာ သကြားလိုပဲ.ချိုမြိန်ပါတယ်.
အစ်မ ကျွန်တော် ဖတ်သွားတယ်နော်...အမြဲတမ်း ၀င်ဖတ်မယ်နော်..
သကြားထက်ချိုတဲ့ အရာလေးတွေ တွေ့ဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အရင် ပေးနိင်အောင် ကြိုးစားရမယ် မဟုတ်လား။
တကယ်ပါပဲ ..ကိုယ့်ပေါ်ပြုဖူးသူ့ကျေးဇူး အထူးသိတတ်စေ ဆိုတဲ့ ..ဆုံးမစာလေးကို ကြားလာမိတယ်..
တစ်ဦးက မေတ္တာ တစ်ဦးကစေတနာ..ပေါ့နော်....
တစ်ခါကျွေးဖူးသူ့ကျေးဇူးကို သိတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးအတွက် ဂုဏ်ယူမိတယ်။ ပြီးတော့ သူကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေကိုလဲ လေးစားတယ်။
ဖတ်ရတဲ့ အတွက်လဲ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။
လူတိုင်းလူတိုင်းသာ အဲဒီအမျိုးသမီးလိုကျေးဇူးသိတတ်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲနော်။။
ကျေးဇူးပါ အမရေ...။ :)
အခုလိုကျေးဇူးမမေ့တတ်တဲ့သူမျိုးကအရမ်းရှားတယ်နော်.။ အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာပိုလို့မေ့သွားတတ်ကြတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တကယ့်ကိုအတုယူစရာကောင်တဲ့ပိုစ့်လေးပါပဲ။ ကိုယ်လည်းကျေးဇူးမမေ့တတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်သတိထားပြီးကြိုးစားရမှာပေါ့နော်..။
ကျေးဇူးတရားဆိုတာ မမေ့ကောင်းတဲ့ အရာပါ။
အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ဖော်ပြနိုင်ရဲရမှာပါ။
Ma Chaw Chaw, It's terrific good. :)Really !!
အမရေ ချိုမြိန်တဲ့ ပီတိကို စားသုံးသွားပါတယ်
ရင်ထဲထိ ရောက်တဲ့ စာစုလေးအတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
အစ်မကိုလည်း ကျေးဇူးပြုချင်လို့ ကော်ဖီတစ်ခွက် ၀ယ်တိုက်။ အဲဒါမှ ကျွန်တော်လည်း ကျေးဇူးပြန်ဆပ်လို့ရမှာ။ မုန့်ပါလည်း စိတ်မဆိုးဘူး။
ဟုတ်ပါ့ ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး ပီတိလေးလည်းဖြစ်၊ စိတ်ထားတတ်မှုလည်း သိရ။ ကျေးဇူးတင်သွားပါတယ် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
ကျမစာဖတ်လိုက်တယ် အ၇မ်းကိုပီတိ မျက်ရည်များတောင်ဝဲမိပါတယ် မချော ဒိထက်ပိုကောင်းတဲ့စာတွေအများကြိးရေးနိုင်ပါစေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ..... အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ... တကယ်ကိုခံစားရပါ၏